संविधान २०७२ जारी भएको १०० दिन पुरा, उपलब्धी कति ? - Himalayan Kangaroo
संविधान २०७२ जारी भएको १०० दिन पुरा, उपलब्धी कति ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १४ पुष २०७२, मंगलवार १५:०८ |
काठमाडौं । नेपाली जनताले आफैले लेखेको नेपालको संविधान जारी भएको एकसय दिन पूरा भएको छ । व्यापक बिरोध र अस्थिरताबीच जारी भएको संविधानका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन थालेपनि नागरिकको मन जित्नेगरी काम भने हुन सकेको छैन ।
संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन थालेका मधेसी दलहरु अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनको लागि बल्ल संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । तर यो विधेयकमा पनि मोर्चा सहमत छैन । मोर्चाकै सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न ठूला दलले पहल भने गरिरहेका छन् । गएको सय दिनमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन जनचाहना त पूरा भयो । तर संविधान आएपछि झनै अन्योल बढ्यो भन्ने आमनागरिकलाई लागेको छ । संविधान जारी भएसँगै बन्द हडताल र नाकाबन्दीले सकस थप्दै गएपछि नागरिकमा असन्तुष्टी बढेको हो । संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे नागरिकलाई समयमै बुझाउन नसक्दा पनि अस्थिरता र अन्योल बढेको हो ।
जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट भनेर धेरैले प्रशंसा गरेपनि कतिपय नागरिकले संविधान नै बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई बुझाउने प्रयत्न पनि प्रभावकारी भएको छैन । सरकारको संविधान प्रचारप्रसारको अभियान पनि उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन । खासगरी तराईका नागरिकलाई संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न मुख्य दलहरुले सकेका छैनन् । संविधान बुझाउन सरकारले ढिलो गरी सुरु गरेको अभियान पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख फेरिए । संविधान अनुसार गठन भएको नयाँ सरकारले काम गरिरहेको छ । संविधानमा असन्तुष्टी जनाएको मधेसी मोर्चाले समेत प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रक्रियामा सहभागिता जनायो । यसरी नयाँ सरकार गठनसँगै सुरु भएको संविधान कार्यान्वयनको काम त्यसपछि पनि अलमलमा परेको छ । तैपनि संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले झण्डै तीनसय नयाँ र पाँचसय पुराना कानुन संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
संविधानले अबको दुई वर्ष अर्थात २०७४ माघ ८ गतेसम्मका लागि अहिलेको संसदको कार्यकाल तोकेको छ । यस अवधीभित्र संविधानमा भएका व्यवस्था लागू गर्न सरकार र दलहरुले सहमतिका साथ कार्यान्वयनको काम सुरु गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
Previousफेसन ठाउँ र परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्छ : सकुन्तला अर्याल
Nextमंगलवार संसद वैठकमा के भयो ?
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार ०२:५७
नेपाली भूमि मिचेर भारतीय बस्ती
२१ आश्विन २०७४, शनिबार ०१:०५
अष्ट्रेलियाको ‘पार्टनर’ भीसा शुल्क विश्वकै महँगो,दशौं हजार जोडी पलायन
३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०४:१३